Otu Onyeisi Ndị Agha Rom Egosi na Ya Nwere Okwukwe Dị Ukwuu | Ihe Ndị Mere na Ndụ Jizọs
MATIU 8:5-13 LUK 7:1-10
A GWỌỌ ONYE NA-EJERE OTU ONYEISI NDỊ AGHA OZI
A GA-AGỌZI NDỊ NWERE OKWUKWE
Mgbe Jizọs zichara Ozizi Elu Ugwu ya, ọ gawara obodo Kapaniọm. Mgbe o ruru ebe ahụ, ụfọdụ ndị okenye ndị Juu gakwuuru ya. Onye zitere ha abụghị onye Juu. Ọ bụ onyeisi ndị agha Rom.
Onyeisi ndị agha ahụ nwere onye na-ejere ya ozi nke ọ hụrụ n’anya. Ezigbo ahụ́ na-arịa onye a na-ejere ya ozi nke na ọ nọzi n’ọnụ ọnwụ. Ọ bụ eziokwu na onyeisi ndị agha ahụ bụ onye Jentaịl, ma ọ chọrọ ka Jizọs nyere ya aka. Ndị Juu ahụ gwara Jizọs na onye na-ejere nwoke ahụ ozi ‘dina n’ụlọ n’ihi na ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ọ na-enwekwa mmekpa ahụ́ dị ukwuu.’ Ọ ga-abụ na ahụ́ na-egbu ya ezigbo mgbu. (Matiu 8:6) Ndị okenye ndị Juu ahụ gwara Jizọs na onyeisi ndị agha ahụ ruru eru ka e meere ya ihe a. Ha gwara ya ihe mere ha ji sị na o ruru eru ka e mere ya ihe a. Ha sịrị ya: “Ọ hụrụ mba anyị n’anya, ọ bụkwa ya wuuru anyị ụlọ nzukọ.”—Luk 7:4, 5.
Jizọs sooro ndị okenye ahụ ozugbo gawa n’ụlọ onyeisi ndị agha ahụ. Ka ha ruwere nso, onyeisi ndị agha ahụ zipụrụ ndị enyi ya ka ha gwa Jizọs, sị: “Nna anyị ukwu, enyela onwe gị nsogbu, n’ihi na ekwesịghị m ka ị bata n’ụlọ m.” (Luk 7:6, 7) Ị̀ hụkwara otú nwoke a na-atụrụ ndị ọzọ ihe ha ga-eme si dị umeala n’obi? Ihe a gosiri na onyeisi ndị agha a dị iche ná ndị Rom ndị ọzọ na-eji obi ọjọọ emeso ndị ohu ha ihe.—Matiu 8:9.
O doro anya na onyeisi ndị agha ahụ ma na ndị Juu anaghị achọ ka ha na ndị na-abụghị ndị Juu na-emekọ ihe. (Ọrụ Ndịozi 10:28) Ọ ga-abụ ihe a mere o ji gwa ndị enyi ya ka ha gaa gwa Jizọs, sị: “Kwuo okwu, ka a gwọọ onye na-ejere m ozi.”—Luk 7:7.
Ihe a onyeisi ndị agha ahụ kwuru juru Jizọs anya, nke mere o ji kwuo, sị: “Ana m asị unu, Ahụbeghị m okwukwe dị ukwuu otú a ọbụna n’Izrel.” (Luk 7:9) Mgbe ndị enyi onyeisi ndị agha ahụ lọghachiri, ha chọpụtara na ahụ́ adịla onye ahụ na-ejere ya ozi mma.
Ngwa ngwa Jizọs gwọchara onye ahụ na-ejere onyeisi ndị agha ahụ ozi, o ji ohere ahụ mee ka a mata na a ga-agọzi ndị na-abụghị ndị Juu nwere okwukwe na ya. Ọ sịrị: “Ọtụtụ ndị si n’ebe ọwụwa anyanwụ na n’ebe ọdịda anyanwụ ga-abịa soro Ebreham na Aịzik na Jekọb nọdụ na-eri ihe na tebụl n’alaeze eluigwe.” Gịnịkwanụ banyere ndị Juu na-enweghị okwukwe? Jizọs sịrị na ‘a ga-atụpụ ha n’ọchịchịrị dị n’èzí. N’ebe ahụ ka ha ga-akwa ákwá ma taa ikikere ezé.’—Matiu 8:11, 12.
Ihe ọ pụtara bụ na a ga-ajụ ndị Juu anụ ahụ́ na-anabataghị ohere e bu ụzọ nye ha iso Kraịst chịa n’Alaeze ya. Ma, a ga-anabata ndị Jentaịl ka ha soro ya rie ma ṅụọ “n’alaeze eluigwe.”
Gịnị mere ndị Juu ji rịọchitere onyeisi ndị agha bụ́ onye Jentaịl arịrịọ?
Olee ihe ọ ga-abụ ya mere na onyeisi ndị agha ahụ achọghị ka Jizọs bata n’ụlọ ya?
Olee olileanya Jizọs kwuru na ndị Jentaịl nwere?